Ndị ahịa nwere ike ịhazi akụrụngwa ahaziri anya dị ka ihe dị iche iche eji eme ihe, dị ka nku anya mmiri, mkpuchi anya ịsa ahụ, nku anya eletriki, nchara nchara nchara eyewash, nku anya mkpanaka, wdg.
Dịka ọmụmaatụ, ụlọ akwụkwọ mahadum, ụlọ nyocha ụlọ ọgwụ na obere ebe ndị ọzọ na-achọkarị mkpuchi anya ma ọ bụ zoo iji belata akara akụrụngwa ma kwado ọrụ nke ndị ọrụ.
Okwesiri ịwụnye nku anya mejupụtara n'ime ime ụlọ kemịkalụ, nke nwere ngwaọrụ eji eme ka anya na ihe ịgba mmiri, ma tinye ya na ala maka iji. Mgbe a na-efesa ihe ndị dị na uwe ma ọ bụ n'ahụ ndị ọrụ, a ga-eji sistemu ịgba nke ihe mejupụtara anya wee saa; mgbe a na-awụsasị ihe ndị na-emerụ ahụ n'anya, ihu, n'olu ma ọ bụ na ogwe aka ndị ọrụ, enwere ike iji ya. Họrọ ụdị nku anya kwesịrị ekwesị dịka ọdịnihu nke ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji nku anya a na-ebugharị rụọ ọrụ na gburugburu ebe ọrụ na-enweghị isi iyi mmiri. Enwere ike iji akụrụngwa eji eme ihe n'ụlọ nrụpụta, nke nwere sistemu ịgba yana ihe ncha anya, nke na-adaba adaba iji.
Ma ọ bụ maka ebe nwere nnukwu mmiri mmiri ma ọ bụ saịtị ewu ebe ọ na-esiri ike ịnweta mmiri n'ihi njedebe saịtị, ndị ahịa anyị na-ahazi ndị na-ekpuchi anya mmiri, ma n'otu oge ahụ chọrọ oge nchekwa mmiri, mma mmiri na akụkụ ndị ọzọ iji mezuo ụkpụrụ
Dịka ọmụmaatụ, n'ihi ọnọdụ okpomọkụ na ụdị ihu igwe na Middle East, anyị na-atụ aro ka ị jiri ọtụtụ nku anya friji, dị ka nkuanya jụrụ oyi; maka ihu igwe oyi dị egwu nke Alaska na North America, ndị ahịa n'ozuzu hazie eyewash kpụ ọkụ n'ọnụ ma ọ bụ nkuchi mgbochi, ọ bụrụ na enwere ihe ọ bụla Maka mkpa ndị ọzọ, dị ka sistemu DCS ma ọ bụ sistemụ mmiri ọkụ, anyị nwere ike ịhazi ngwaahịa metụtara gị maka ndị ahịa chọrọ. .
N'otu oge ahụ, n'ihi ọnọdụ dị iche iche nke ihu igwe na ihu igwe dị iche iche na mba na mpaghara dị iche iche, anyị nwere ike ịhazi ụfọdụ ndị na-asa anya dị ka mkpa nke ndị ahịa mpaghara.